#GeospatialByDefault-Iforum yeGeospatial 2019 - iGeofumadas
#GeospatialByDefault-Iforum yeGeospatial 2019
Matshi, 2019 Geospatial - GIS
Ngo-Epreli 2, 3 no-4 walo nyaka, izigebenga eziphambili kubuchwephesha be-geospatial ziya kudibana eAmsterdam. Sibhekisa kumnyhadala wehlabathi owenzeka kwiintsuku ezi-3, obubanjelwe kule minyaka idlulileyo, ebizwa ngokuba yiGeospatial World Forum 2019, iqonga lokudibana apho iinkokheli zentsimi ye-geospatial zibonisa khona izinto ezintsha kwisakhelo se-Geo-engineering, kunye nokusetyenziswa kwayo ngeesimpoziya, iindibano zocweyo, iisemina okanye iindibano zocweyo. Ukuthatha inxaxheba kubalulekile, ubuncinci iingcali ezili-1500 kunye nemibutho engama-500 eya kubandakanyeka kuphuhliso lwalo msitho.
Njengoko unyaka ngamnye bajolise kumxholo othize, unyaka odlulileyo wawuyi-GEO4IR: Okwesine i-industrial geo-inable revolution, kulo nyaka ungeze i-hashtag, umxholo oyintloko #geospatialbydefault-Nika amandla amawaka ezigidi!
I-ajenda idibana neeprogram ze-8, ngasinye sidibene kunye nento, i-geotechnology, intsebenziswano okanye isicelo sabo kwintsimi yangempela, kuthiwa ngezantsi:
Geo4SDGs: Ukujongana ne-Agenda 2030
Ushishino kunye noDemokhrasi loMhlaba, Ukuthengisa kunye nentando yesininzi yokubonwa komhlaba.
Cities Smart Izixeko eziMandla
I-Analytics Indawo kunye noBuchule boBuchuleUhlalutyo lwendawo kunye nolwazi lwezoshishino
IScience Data Summit -Ingqungquthela yesayensi yedatha
Ulwakhiwo kunye nezoBunjineli -Ukwakha nezoBunjineli
Iikhompyutha zobugcisa - Iingoma zobugcisa
Inye yale nkqubo iqukethe imisebenzi emininzi; umzekelo, Ziya kusetyenziswa baza amagumbi eziphambili -plenarias- mboniso, omnye weyona misebenzi ezilindelekileyo ukwenzela abaxumi kunye nxaxheba, njengoko ziza kusonjululwa abameli Iinkampani ezinkulu kuphuhliso geospatial kwakunye ubuntu zezopolitiko shishini
Lo msebenzi ubizwa ngokuba "Inkokheli ecingelwayo kunye nokuzibandakanya kwezopolitiko - PUqeqesho lobunkokeli nokuzibophelela kwezopolitiko, kwaye yenziwe ngamaphaneli ama-3: iPhaneli yezoShishino, iCandelo loLuntu neQela loMbutho woPhuhliso kunye neQela labaPhathiswa. Kula mapaneli, izihloko ezinje ngezi: ukuveliswa kwezinto ezintsha, umanyano kunye noqikelelo kwicandelo le-geospatial, amanyathelo okhuseleko kunye nokukhutshwa okuzinzileyo kwemithombo yendalo, inguquko yesine kwimizi-mveliso ekhokelwa bubukrelekrele bokuzenzela - i-AI, Idatha enkulu, i-intanethi iya kuziswa. Izinto ze-IoT kunye neerobhothi.
Ezinye zezi ntetho ziya kudibana ngokuxhomekeke kubuchwephesha okanye into eza kuboniswa, kwaye phakathi kwezithethi esinokuzikhankanya: UJack Dangermond - uMongameli we-ESRI kunye nelungu leBhunga leHlabathi leShishini leGeospatial, u-Ola Rollen-Mongameli kunye ne-CEO ye-Hexagon, USteve Berguld-Mongameli kunye ne-CEO ye-Trimble USA, Kwaku Asomah-Chermeh - Umphathiswa Wezemihlaba kunye neZendalo- eGhana, okanye uPaloma Merodio Gomez -Sekela Mongameli we-INEGI Mexico.
Inkqubo yokuqala enegunya Geo4SDGs: Ukujongana ne-Agenda 2030, Izihloko zobudlelwane phakathi kokuhlanganiswa kwethekhnoloji, ubunjineli, uluntu kunye nokugcinwa kwendalo kwintetho ziya kuxutyushwa. Ukubonisa ngale ndlela, ubukho beenkqubo kunye ne-geotechnologies ezivumela ukuyila, ukucwangcisa nokudala izakhiwo kunye nezibonelelo buhlobo -Ubuhlobo nokusingqongileyo-, uxanduva kwezentlalo noqoqosho. Phakathi kwemixholo eyenza le nkqubo yile: Ukudibanisa abantu, iplanethi kunye nokuchuma, ngokusebenzisa iilensi zomhlaba, izalathi ze-SDG (SDG) kunye nenkqubo yokubeka iliso yokuxhotyiswa kwendawo: ukusuka kumgaqo-nkqubo wehlabathi ukuya kubuchule Idatha kaZwelonke kunye neNkulu kunye noHlahlelo loPhuhliso oluZinzileyo.
Kwi-Geo4SDG, kuya kufundiswa izifundiswa, abalawuli beenkampani, amalungu ezopolitiko kunye nezokhuseleko, abaza kuveza ukubaluleka kokusetyenziswa kunye nokuxhaphazwa kwedatha yendawo, ukwenza izigqibo kwinqanaba lentlalontle, lezopolitiko, lezentlalo, lezoqoqosho kunye netekhnoloji. Kananjalo, baya kuthi babonakalise indlela idatha ye-geospatial emele ngayo isixhobo esingabalulekanga esweni kunye nokulinganisa izinto zendalo, izehlo okanye iintlekele. Ezinye zezithethi eziza kuthatha inxaxheba kulo mxholo zezi: UDean Angelides -iNtloko yezeManyano yamaZwe ngamaZwe e-ESRI, uStephen Coulson - iNtloko yeOfisi ye-ESA yeeNkqubo eziZinzileyo, kunye noNjingalwazi Chen Jun - Isazinzulu kwiZiko leLizwe IGeomatics yase China.
Inkqubo yesibini Ukurhweba kunye nokuDemokhrasi yoMhlaba -Urhwebo kunye nentando yesininzi yokujonga umhlaba, kule nkqubo, ababonisi baya kuchaza ukuba ukukhula kwezobuchwephesha kunye nezemali kweemveliso zokujonga uMhlaba, izicelo kunye neenkqubo kube njani. Ukongeza koku, njengoko oku kukhula kuthetha ukusetyenziswa kakhulu kwezi teknoloji zokujonga umhlaba kule minyaka idlulileyo, eguqula ukufikelela kwidatha yendawo, kunye nomdla womsebenzisi ekukhupheni nasekulindeleni kubuchwepheshe obutsha obuza kuphuhliswa.
Wonke umntu ofumana ithuba makaye kulo msitho. Kunqabile ukuba sifumane inkcitho yolwazi kunye neengcali kwicandelo, umboniso wabenzi kunye nokugubungela kumazwe ngamazwe ukuba kunye sisabathathi-nxaxheba kubaluleka ukuba i-geospatial ibe neyezohlukeneyo kumashishini abunjineli.
Phakathi kwabalinganiswa abajongene nophuhliso lwenkqubo kunokubhekiswa:
Umqambi kaRichard Blain kunye ne-CEO
Umhlaba-i - United Kingdom,
UAgnieszka Lukaszczyk UMlawuli oPhezulu weMicimbi yeplanethi ye-EU-eBelgium,
U-Alexis Hannah Smith u-CEO kunye nomseki we-IMGeospatial United Kingdom,
UJean-Michel Darroy usekela-Mongameli, iNtloko yeQhinga lokuSebenza ngobuhlakani, uKhuselo lwe-Airbus kunye neNdawo
Bonke, kunye nabanye abathathi-nxaxheba, baya kuthetha nge: ikusasa lombono womhlaba, ukuchithwa kwedemokhrasi yedatha yokujonga indawo okanye iinkqubo kunye nezicwangciso zokuphuhlisa imboni yokujonga indawo.
Ngakolunye uhlangothi, abaninzi banomdla kwiprogram yesithathu Cities Smart, eliye lagqitha kwiminyaka yamuva. Oku kuya kujongana nemiba enjengoku: ukudibanisa kwengqiqo yoluntu kweso sixeko ukuphucula ukusebenza, iziseko ezixhunyiwe kwi-smart travel, amandla asezidolophini, ukulawula okufanelekileyo kunye nokucwangcisa izixeko eziqhelekileyo okanye ukulandelelana kolwazi kwizixeko.
Kuya kufuneka kwakhona kukhankanywe ukuba izithethi ziya kunika umbono wazo kunye neengxoxo ngezixhobo zetekhnoloji eziyimfuneko ekwakhiweni kweSixeko esiSmart, ezinje ngee-network zonxibelelwano, iikhamera, izixhobo ezingenazingcingo kunye nokunxibelelana kwazo ne-IoT. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa kwanendlela ukuhlangana kwetekhnoloji nommi kunye nenkqubo yokufumana idatha enceda ukwenza ukuba izixeko zisebenze ngakumbi kwenzeka, konke oku kusetyenziswa indlela yohlalutyo lweengcali ezilungiselelwe, iingcali ebaleni. Uhlalutyo lomhlaba, ukuhamba kunye netekhnoloji.
Phakathi nxaxheba alo: Ted Lamboo senior usekela mongameli Bentley Systems, Jose Antonio Ondiviela - uMlawuli izisombululo Microsoft eSpeyin, Jette Vindum- Smar City Umququzeleli kuMasipala of Vejle. EDenmark, uRininhard Blasi - iGosa loPhuhliso lweMakethe ye-European Agency GNSS kunye neSiva Ravada uMlawuli oyiNtloko we-Oracle USA.
Iqela lesithathu li malunga Geo4Enviroment - Geo yendalo, ukuba ngemibukiso yalo iza kuthatha umyalezo wendlela yokusetyenziswa kwezixhobo ze-geospatial, ingaqokelela kunye nokuhlaziya i-dynamics eyingxenye yendalo. Ingqwalasela yayo ephambili kukuxhaswa kwee-geotechnologies kwisisombululo seengxaki ezibalulekileyo zendalo. Izihloko ezibandakanyiweyo yile nkqubo ikakhulu ezintathu: Cross-umda Partnership ulwaphulo-mthetho lokusingqongileyo, post-intlekele yokwakha: wobuyiselo vs uzinzo kunye nezisombululo geospatial ukutshintsha kwemozulu: Ngaba siye senza ngokwaneleyo?
Izithethi ezenza eli qela, ukukhankanya uninzi lwazo, zezi: U-Ana Isabel Moreno osisazi ngezoqoqosho, iZiko loShishino, ii-SMEs, iiNgingqi kunye neziXeko i-OECD -France, uGqirha Andrew Lemieux Umququzeleli weZiko loLwaphulo-mthetho ngokuchasene neZiko laseWildlife Institute for Study. Ulwaphulo-mthetho kunye noMthetho (NSCR), Umphathi weDavyth Stewart weHlabathi lamaHlathi kunye noNyanzeliso loNgcoliseko- INTERPOL France, Kuo-Yu Slayer Chuang CEO kunye Co-Founder Geothings -Taiwan, uStefan Jensen oyiNtloko yeQela loLawulo lweDatha- i-Arhente yezeNdalo yaseYurophu, eDenmark.
Ukubaluleka kwesigameko esinjengalesi kukuba yonke imizamo kunye nokudityaniswa kwenziwa kwenziwa kubonakale, kulwakhiwo lwezisombululo ezithathela ingqalelo intsebenzo yendawo yomntu, ethi ekugqibeleni iguqulele ekuguqukeni komhlaba okuhle kunye nentlalo-ntle yomntu . Ngokunjalo, yenza indawo yengxoxo, apho ibonakaliswa khona ngokuthatha inxaxheba kwabahlohli, abafundi, abasebenzisi (abavela kumacandelo oluntu nawabucala), kunye nababoneleli, ukubaluleka kokusetyenziswa komhlaba kunye nobuchwephesha-kunye nokuhlaziywa kwendawo- ekukhuleni koqoqosho lwehlabathi kunye nokugcinwa kwendalo.
Ezinye iinkqubo, ezibaluleka ngokulinganayo njengalezo zikhankanywe ngasentla, njengoko I-Analytics Indawo kunye noBuchule boBuchuleUhlalutyo lwendawo kunye nolwazi lwezoshishino, Usuku lokuqalisa, IScience Data Summit -Ingqungquthela yezeNzululwazi ngeDatha, Ulwakhiwo kunye nezoBunjineli -Ukwakha nezoBunjineli, kuphakamisa imiba ebaluleke kakhulu kuphuhliso oluqhubekayo lwe-geospatial. Ke ngoko siyakumema ukuba uthathe inxaxheba kwesi siganeko sikhulu sehlabathi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Kutheni usebenzisa amawele edijithali ekwakhiweni
Post Next Iigxina ze-2019 Geospatial World Leadership ziye zaziswa kwaye ziya kuhanjiswa kwi-GWFOkulandelayo »